Degdeg:- Jubbaland oo caawa jawaab kulul siisay DF + Odayaasha saxda waa kuwee?. – Wararka Khaatumo , Somaliland , Puntland Iyo Somalia
HomeFaalloyinkaDegdeg:- Jubbaland oo caawa jawaab kulul siisay DF + Odayaasha saxda waa kuwee?.
Degdeg:- Jubbaland oo caawa jawaab kulul siisay DF + Odayaasha saxda waa kuwee?.
July 24, 2019 marqaan Faalloyinka, Soomaliya, Wararka maanta 0
Dowlad goboleedka Jubaland ayaa ka jawaabtay qoraal ka soo baxay wasaaaradda Arrimaha gudaha dowladda Federaalka Soomaaliya oo ku saabsanaa in uusan sax ahayn liiska odoyaasha dhaqanka Jubaland ee uu soo gudbiyay guddiga doorashooyinka iyo xuduudaha Jubaland.
War-saxaafadeed ka soo baxay dowlad goboleedka Jubaland ayaa lagu sheegay in qoraalka ka soo baxay wasaaradda Arrimaha gudaha dowladda Federaalka Soomaaliya uu yahay mid nasiib-darro ah oo aan wax sharciyad haysan islamarkaana baal-marsan Dastuurka KMG ee dalka iyo kan Jubaland labadaba.
Jubaland waxay shacabka Soomaaliyeed iyo Beesha Caalamkaba ugu baaqday in ay la socdaan fara-gelinta qaawan ee dowladda Federaalka Soomaaliya ay ku hayso arrimaha doorashada Jubaland sidaasi darteedna wixii cawaaqib xuma ah oo ka yimaada ay mas’uuliyadeeda qaadi doonto Villa Somalia.
Waxay kale oo guud ahaan shacabka Jubaland ugu baaqday in ay ilaashadaan amniga xasiloonida midnimada iyo wadajirkooda waxaana ay mamnuucday shirar ay sheegay in lagu khal-khal gelinayo Jubaland.
Dhinaca kale Jubaland waxay cambaaraysay qaraxyadii ka dhacay magaalada Boosaaso ee lala xiriiriyay dowladda Qatar waxaana ay nasiib-darro ku tilmaantay in dowladda Federaalka Soomaaliya difaacayso dowlado shisheeye oo xasuuq iyo burburin ku haya shacabka Soomaaliyeed.
Degdeg:- DFS oo hadda kahadashay qaraxii galabta + Khasaare aan la filayn…
Waxa uu ahaa shaqaale waxaa lawaayay 10sano kahor laakin hadda ayaa lahelay maydkiisa!!!